စိန်ပေါက်ပေါက်သို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » စိန်ပေါက်ပေါက်သို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
- mg mg
Posted by mg mg on Feb 23, 2012 in Critic | 24 comments
ရေးချင်တာတော့ သူကြီးဆီကိုတိုက်ရိုက်ရေးချင်တာပါ၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကအသစ်ဆိုတော့ ဘာများဖြစ်သွားမလဲဆိုပြီး စိုးရိမ်လို့လက်အငှါးတပ်တာပါ။ စိန်ပေါက်ပေါက်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး နာမည်လေးပြောင်းပေးပါလား။ ကျနော်က နာမည်တွေ့ရင် စာလိမ်/ပြောင်းပြန်ဖတ်တာ အကျင့်ပါနေလို့ပါ။ စိန်ပေါက်ပေါက်-ဆိုတော့ အဲ-အဲ ။
လမ်းညွှန်စာရေးပေးတာ ကျေးဂျူးကမ္ဘာပါ။ မဟုတ်ရင် ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ဒါတောင် မေ့မေ့သွားလို့ ခဏခဏပြန်ကြည့်နေရတယ်။ ဒါထက်နဲနဲလေးအသေးစိပ်ရေးပေးရင် ပိုကောင်းမလားလို့။ နောက်တစ်ခုက အသစ်သမားတွေ ပို့စ်တင်တဲ့အခါ လိုအပ်ချက်(ဥပမာ=ခေါင်းစဉ်မပါခြင်း-စသည်) များရှိခဲ့လျင် ဘယ်လိုလုပ်ပါ-စသည်ဖြင့် ကွန်မန်းလေးများဝိုင်းပေးနိုင်ကြလျင် ကျေးဇူးတင်စရာဖြစ်မလားလို့၊ နောက်ပြီး ရေးတဲ့အခါမှာ မြန်မာလိုလေး အတတ်နိုင်ဆုံးဖေါ်ပြပေးစေချင်ပါတယ် လိပ်စာဆိုလျင် ကန်စွန်းရွက်၊ ပေါက်ပေါက်ဆုပ် (စိန်ပေါက်ပေါက်မဟုတ်) လောက်ပဲသိလို့ပါ။ နောက်တစ်ခု(ခု-ခုနိုင်လွန်း-သူများမပြောခင်ကြိုပြောတာ) စာမျက်နှာလက်ယာဘက်က မိုင်ပွိုင့်(အဲဒါတောင် အဘိဓာန်မှာခေါင်းနောက်အောင်လိုက်ရှာထားရတာ) အောက်တစ်ကြောမှာရှိတဲ့ လိပ်လိုရေးထားတဲ့ စာများကိုမျှားညွှန်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့မြန်မာပြန်အဓိပါယ်လးပေါ်လာအောင် လုပ်ပေးလို့ရလျင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ အဲဒါဆို လိပ်လိုလဲတွေ့ရ မြန်မာလိုလဲသိရဆိုတော့ ပိုပြီးအကျိုးများမလားလို့ပါ၊ ကြားဖူးတာပြောရလျင် ဂျပန်တွေက တစ်ခြားဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ အသိပညာအတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတွေကို သူတို့ဘာသာအဖြစ်ပြန်ဆိုကြတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်၊(ကြားဖူးတာပြောပါတယ်)။ နောက်ပြီး ရွာသူ/သားတွေ အသစ်တိုးပွါးလာတော့ ရွာလည်းစည်စည်ကားကားရှိတာပေါ့၊ အဲဒီလိုအသစ်ရောက်လာတဲ့ရွာသားတွေထဲကျနော်တို့လို လိပ်လိုမတတ်တဲ့ နလပိန်တုံးတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေနိုင်မလားလို့ပြောကြည့်တာပါ၊ နောက်တစ်ခါ(ဒီတစ်ကြိမ်တော့-မခုတော့ဘူးခါလိုက်ပြီ) သူကြီးတို့ရဲ့စည်းကမ်းချက်ထဲက “အလဘ-သလာဘ”ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးပါ အမှန်က အလာပ သလာပ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ အလ္လာပ သလ္လာပ-လို့ ရေးတယ်ထင်ပါတယ်။ ဆရာလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ ကိုယ်သဘောကျကြင်လည်တဲ့ရပ်ရွာ အမှားကင်းစေချင်တဲ့ စေတနာသန့်သန့်ပါ။
About mg mg
mg mg has written3post in this Website..
View all posts by mg mg →
ခဏလေး မောင်မောင်ရေ စိန်ပေါက် ချီးပန်းနေလို့ အိမ်သာတက်နေတယ်
ကောင်မနော် နင် ညည်း သိပ်မကဲနဲ. ဟိုအသစ်ကလေး လန်.ပြေးသွားအုံးမယ်….
လန့်မပြေးလောက်ပါဘူးဗျာ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ကလဲ
သူက ဒီရွာမှာ ပျော်လို့တဲ့
ဒါနဲ့ ရွာထဲမှာ သန်းခေါင်စာရင်း မကောက်သေးဘူးလားဗျ
ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် သူများတွေတော့ ပြင်နေကြပြီ
ဆရာဘဲ ဝမ်းချူလိုက် ဆိုပြီး…ဆိုပြီး..
ဖရဲမ ပေါက်ကျော်မကို ထိန်းထားနော်
အဲသကောင်မက အသစ်လေးတွေဆိုရင် ဆွဲစားချင်နေတာ။
အမှားလေးကိုထောက်ပြတယ်ဆိုတော့လဲ မောင်မောင်ရေ ကိုစိန်အစားကျေးဇူးတင်
ဒါနဲ့ ကိုစိန်ပေါက်ပေါက်က ဝမ်းသွားနေတယ်ပြောတယ်။ဆေးခန်းကပြန်လာရင်ပြော
သောကြာကို သောက်ကြာလို့ အသံထွက်တာဘာကြောင့်
စကြ၀ဋ္ဌာ ကို စက်ကြာဝဋ္ဌာလို့ ဖတ်တာဘာကြောင့် ဆရာလေးရေးပြရင် ပိုကောင်းမယ်
နောက် ခသံ ကို ဥပမာ မြင်ချင်တွေ့ချင်လွန်းလို့ ဆိုတာကို အဆိုတော်က
မြင်ချင်တွေ့ချင် မှာ ခသံနဲ့ ထွက်တာ မှားနေတာ ဟို အယ်ဆိုင်းဇီဆိုလား
လာချင်ရင် အနီးလေးဆိုတာ ခသံထွက်နေတယ် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လောက်ရေးရင်
ကျေးဇူးပါ။ အကို က မြန်မာစာရေးတတ်ဖတ်တတ်ပါ အင်္ဂလိပ်စာတော့ သိပ်မတတ်ဘူး
နောက်စိန်ပေါက်ပေါက်လို ဆရာသမားကို ချီးကျူးတယ် ပို့စ်တိုင်းဖတ်တယ်
ဖရဲတို့ နာဂရချစ်သူတို့ တကယ်လေးစားတယ်ဆရာလေးမောင်မောင်ကိုလည်းကြိုဆိုတယ်
ကျွန်တော်လည်း အခုမှ တက်သစ်စ အဆိုတော် မှားလို့ တက်သစ်စလေးဘဲရှိသေးတာပါ
ရွာထဲမှာ ကျွန်တော်ထက်တော်တဲ့သူတွေ အများကြီးဗျ
အော် ဆရာထက်ရယ်…..ခုလိုဆရာ့ထင်မြင်ချက်လေးကြားရတော့ အားတက်ရတာ အမှန်ပါဗျာ။
သိပါတယ် ဆရာထက်ရေ။အဲဒါကြောင့်လဲ သမားကောင်းတစ်လက်မို့ လေးစားတာပါနော့်။
ကဲဒေါ်စိန်ပေါက်ပွဲတောင်းနေပြီ။ တပွဲလောက်။ အဲဘာလဲတော့မသိဘူး။
၀င်ပြီးမန်းကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ “အရူးဘုံမြှောက် ချီးခြောက်ကောက်စား”တဲ့ ကိုထက်ဝေးရေ ခင်ဗျားပြောတဲ့ စကြာဝဠာ တို့ သောကြာတို့ဆိုတာ ပါဠိစာနဲ့အနည်းငယ်ဆိုင်နေတဲ့အတွက် ပါဠိစာဖတ်နည်းဆိုပြီး ပို့စ်လေးတစ်ခုကျနော်ရေးကြည့်ပါဦးမယ်။ နောက်တစ်ပိုဒ်ဖြစ်တဲ့“ချင်”ကို အရသာတွေထဲက“ချဉ်”လို့ အသံထွက်တဲ့အကြောင်းကတော့ မြန်မာစာအသံထွက်ဖြစ်တဲ့ ဘယ်ပုဒ်ဘယ်ပုဒ်တွေရဲ့နောက်က စာလုံးကို ဘယ်လိုအသံထွက်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဆရာတစ်ယောက်ပြောတာမှတ်ဖူးပါတယ်၊ ကျနော်လဲသေသေချာချာတော့ မသိသေးဘူး လေ့လာပြီးအခွင့်သာလျင်ရေးကြည်ချင်ပါသေးတယ်။ ကိုစိန်ပေါက်ပေါက်ကြီး ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျ သူ့အားကိုးခါမှ မပြီးသေးဘူးလား၊ ပြောင်းဖူးရိုးစို့ထားဗျာ။
၀င်ပြီးမန်းကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ “အရူးဘုံမြှောက် ချီးခြောက်ကောက်စား”တဲ့ ကိုထက်ဝေးရေ ခင်ဗျားပြောတဲ့ စကြာဝဠာ တို့ သောကြာတို့ဆိုတာ ပါဠိစာနဲ့အနည်းငယ်ဆိုင်နေတဲ့အတွက် ပါဠိစာဖတ်နည်းဆိုပြီး ပို့စ်လေးတစ်ခုကျနော်ရေးကြည့်ပါဦးမယ်။ နောက်တစ်ပိုဒ်ဖြစ်တဲ့“ချင်”ကို အရသာတွေထဲက“ချဉ်”လို့ အသံထွက်တဲ့အကြောင်းကတော့ မြန်မာစာအသံထွက်ဖြစ်တဲ့ ဘယ်ပုဒ်ဘယ်ပုဒ်တွေရဲ့နောက်က စာလုံးကို ဘယ်လိုအသံထွက်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဆရာတစ်ယောက်ပြောတာမှတ်ဖူးပါတယ်၊ ကျနော်လဲသေသေချာချာတော့ မသိသေးဘူး လေ့လာပြီးအခွင့်သာလျင်ရေးကြည်ချင်ပါသေးတယ်။ ကိုစိန်ပေါက်ပေါက်ကြီး ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျ သူ့အားကိုးခါမှ မပြီးသေးဘူးလား၊ ပြောင်းဖူးရိုးစို့ထားဗျာ။ ပို့စ်ထဲမှာကျန်နေလို့ဗျ ခင်ဗျားပြောတဲ့Visual နဲ့HTML မှာ လွယ်တဲ့Visual ကိုကလစ်နှိပ်တာ ခေါင်းစည်းစားသားနေရာပဲရိုက်လို့ရတယ်၊ အောက်ကစာကိုယ်ရိုက်မယ့်နေရာကို ကာဆာချတာ ဘာမှမမြင်ရဘူး၊ အောက်နားကအကွက်ထဲမှာလည်း စက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုလည်နေတာဗျာ စိန်ပေါက်ပေါက်အတိုင်းပဲ နာရီဝက်ကျော်ကျော်စောင့်ပေမယ့် လည်လို့ကောင်းတုံး အဲဒါနဲ့ တစ်ဖက်က HTMLကို ကလစ်နှိပ်ကြည့်တော့ရတာနဲ့ အဲဒီကနေ၀င်ရေးပြီး ရောက်ရောက် မရောက်ရောက်ပို့လိုက်တာ တော်ပါသေးရဲ့ရောက်သွားလို့ အဲဒါလေးလဲရှင်းပြပေးကြပါဦး။
ပေါက်ဖော်၊ ပေါက်ကျော်၊ မစာဥ(ရွာသာကြီး)၊ တောက်တဲ့၊ စိန်ပေါက်ပေါက်
အင်း SP ကို မြန်မာမှုပြုပြီး ဘာသာပြန်ရရင် …….
ဆူတဲ့အခါ ပူညံပူညံ လုပ်တတ်လို့ဆာပူ
အီးပါတာ ကောင်းကောင်းမပါရပါကလား ဟရို့ ..ဗဒစ်.ဗျစ်..ဘစ်..
Visual နဲ့ ရေးရာမှာ ခေါင်းစည်းရပြီး Text Body (အမှန်အကန်ရေးတဲ့နေရာ)မှာ လုဒ်ဒင်နဲ့ တွေ့ တာကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ပါဗျို့ 
Visual နဲ့ ရေးတဲ့အခါ ပုံတင်နည်း၊စာအမျိုးမျိုးရေးနည်းကို အံချာတုံးရဲ့ နောက်ဆုံးပို့ စ်မှာ လေ့လာကြည့်ပါဗျာ
Html နဲ့ ဆို ပုံထည့်တာတို့စာလုံး အထူတို့ အစောင်းတို့အကုန်လုံး အရှိအတိုင်း မပေါ်လို့ …ရှုပ်မှာဆိုးလို့ ပါ..
ကျွမ်းကျင်သလို တင်ကြပါဂျို့ ..
ပို့ တင်တဲ့အခါ Copy/Paste ဖြစ်တာတို့ ၊ခေါင်းစဉ်မပါတာတို့ က စာရေးသူနဲ့ ပဲ ဆိုင်တယ်ဂျို့ .
မတင်ခင် သေချာလေး စစ်ပြီးမှ Publish လုပ်သင့်ပါတယ်
ခေါင်းစဉ် မပါပဲ တင်မိသွားရင်
အဒီပို့ စ်အောက်မှာ ဘယ်ခေါင်းစဉ် ထည့်ပေးပါ ဆိုပြီး ကွန်းမန့် ပေးခဲ့ရင် သဂျီးလာတဲ့အခါ ပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဗျာ
အကုန်နီးပါး နားလည်ကြတာမို့ 
များကို နာမည်ကြီးတပ်ပြီး မကြပ်ပါနဲ့အာစိရယ်…
များကြောက်ချီးပန်းပြီး ဘဒစ်..ဗဒစ်..ဗျစ်..ဗျစ်..ဖြစ်နေလို့ ပါ
ရွာထဲမှာ နာမည်ပြောင်းပြန်ဖတ်တဲ့သူ ပေါ်လာပြီနော် …
ရွာသူားများ ကိုယ့်နာမည်ကို ဖတ်ပြီး
နာမည်ခဏခဏပြောင်းတဲ့ ဒေါ်စိန်ပေါက်ကြီးကို အားကျလို့ နာမည်ပြောင်းလိုက်တာ ….
စနေ ပြောမှ တွေးကြည့်မိတယ်။
သူများ မပြောခင် ကိုယ့်ဟာကို အရင် ကြိုပြောထားမယ်။
သို့သော် ခေါ်ချင်သလို ခေါ်။
ကျုပ် ကတော့ မပြောင်းပါ ။
ကျုပ် နာမည် အရီးလတ် ကိုများ ပြောင်းပြန် ကြည့် ပြီးကြပြီလား မသိ။
ကိုမောင်မောင် ရယ်။ ကြုပ်ကျက်လိ ပါဦး။
အလာပ သလာပ လို့ပြင်လိုက်ပါပြီကွယ်..
လိပ်လိုကတော့.. သတင်းစာမှာတောင်.. မြန်-လိပ် ဖြစ်ဖို့ဝိုင်းပြောနေကြတာ…။
ယူအက်စ်ဘေ့စ် သတင်းစာတိုက်ဖြစ်တာမို့.. ဒီရွာထဲလာရင်.. အဘိဓာန်လေး ဆွဲထားပေါ့…။
‘ဘာသာမျိုးခြား စာစကားသင်ကြားသင့် သည်မှတ်’တဲ့..